निःसन्देह जिम्मेवारी र दायित्वबोधको भारी पुरुषले भन्दा महिलाले नै धेरै बोक्नुपर्छ । त्यो सामाजिक भारी पनि हुनसक्छ र पारिवारिक भारी पनि । सामन्ती समाजका अवशेषहरू अझै किनारा नलागिसकेको हुँदा नेपाली समाजका महिलाहरूले अझै पनि अनेक उत्पीडन झेल्दै पारिवारिक समस्याहरूमा आफूलाई अल्झाउन बाध्य छन् । तर, केही महिला भने सामाजिक÷पारिवारिक भारीहरूले थिचिएर पनि सफलताको शिखर चुम्न सक्षम ठहरिएका छन् । त्यस्ता महिलाहरू उत्पीडन, अत्याचार झेलिरहेका समाजका तमाम महिलाहरूका निम्ति प्रेरणाका स्रोत बन्दै आएका छन् ।
‘प्रेरणादायी महिलाहरू’ अनेक सामाजिक÷पारिवारिक उल्झनहरू पन्छाउँदै आफ्नो क्षेत्रमा स्थापित १५ त्यस्ता महिलाहरूको संघर्षको गाथा हो, जसलाई नेपाली समाजले गर्व गर्नुपर्ने हुन्छ । संघर्षका अनेक खुट्किलाहरू पार गर्दै आ–आफ्नो क्षेत्रमा स्थापित विभिन्न क्षेत्रका १५ महिला व्यक्तित्वहरूलाई चिनाउने कार्यमा मोतीदेवी स्मृति केन्द्रले अग्रसरता लिएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको संस्थापक सदस्य मोतीदेवीको नाममा स्थापित स्मृति केन्द्रले यसअघि पनि नेपाली समाजका प्रेरणादायी महिला व्यक्तित्वहरूलाई चिनाउने प्रयत्न गरेको थियो । यो पुस्तक त्यही शृंखलाको पछिल्लो कडी हो ।
निजामती सेवाको उच्च पद हो, सचिव । एकाध महिलाले मात्र सचिवजस्तो उच्च र जिम्मेवार पद सम्हालेका छन् । चन्द्रकला किरण त्यस्ती सौभाग्यशाली महिला हुन्, जसले नेपालको इतिहासमा ‘पहिलो सचिव’ बन्ने अवसर पाइन् । २०३८ सालमा उनले कामु सचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्न पुगेकी थिइन् । अझै पनि निजामती सेवाको माथिल्लो तहमा सचिव हुनेहरूमा पुरुषहरूकै बाहुल्य छ तर किरणले भने पहिलो सचिव बनेर इतिहास रचिन् । त्यस्तै, चैतमाया डंगोल त्यस्ती महिला हुन्, जसले २००८ सालमा नै नेपाल प्रहरीमा सेवा थालिन् र पहिलो महिला प्रहरी बन्ने सौभाग्य बटुलिन् । नेपाली समाजमा महिलाहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण अत्यन्तै संकीर्ण रहेको तत्कालीन समयमा घर–परिवारबाट अवरोध हुँदाहुँदै पनि प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेकी डंगोलले असईबाट अवकाश प्राप्त गरिन् ।
नेपाली समाजको विकास र उत्थानमा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्दै आएकी अर्की पात्र हुन्, डा. मीना आचार्य । करिब आधा शताब्दीयता विकास, अर्थतन्त्र, लैंगिक सम्बन्ध, श्रम बजार, राजनीति, गरिबी र योजनाजस्ता विषयमा अध्ययन–अनुसन्धान गर्दै आएकी डा. आचार्यले संघर्षका धेरै खुट्किला छिचोलेकी छन् । भूतपूर्व प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यकी सुपुत्री डा. आचार्यले विभिन्न पदमा रहेर राष्ट्र विकासका निम्ति योगदान गरेकी छन् । नेपालको वामपन्थी राजनीतिमा अग्र मोर्चामा रहेर क्रियाशील रहेकी पात्र हुन्, कमलादेवी अमात्य । शिक्षण पेसामा आबद्ध रहेकै समय राजनीतिसमेत गर्न थालेकी उनले धेरै महिलालाई संगठित, जागृत र क्रियाशील तुल्याउन अथक भूमिका निर्वाह गरेकी छन् । राजनीतिमा महिला सहभागिता न्यून रहेको बेला उनले देखाएको क्रियाशीलता प्रशंसायोग्य देखिन्छ ।
राजनीतिमा क्रियाशील रत्ना राजभण्डारी, नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रमा लामो समयदेखि कार्यरत प्रेमकुमारी पन्त र पहिलो महिला उपसभामुख बन्न सफल लीला श्रेष्ठ सुब्बाको जीवनवृत्त पनि सो पुस्तकमा समेटिएका छन् । केही वर्षअघि मात्र सुशीला कार्की प्रथम महिला प्रधानन्यायाधीश बन्न सफल भइन् । नेपालको न्याय क्षेत्रमा सदैव पुरुषहरू मात्रै प्रधानन्यायाधीश बन्दै आएको परिप्रेक्ष्यमा कार्कीको सफलता आफैंमा सबै महिलाहरूका निम्ति प्रेरणाको स्रोत बन्न पुगेको थियो । राजनीतिक क्षेत्रमै आबद्ध उत्तरा कोइराला गौतम, टेकु नेपाली, व्यवसायमा चम्केकी अञ्जना ताम्राकार, जातीय विभेद र उत्पीडनविरुद्ध आवाज उठाउने रामरती राम, नेपाली रंगमञ्च क्षेत्रकी सफल हस्ती निशा शर्मा, नेपाली उद्योग क्षेत्रमा जमेकी शोभा गुरुङ र सगरमाथा आरोही रोजिता बुद्धाचार्यको जीवनका प्रेरक पाटाहरू खोतल्न उक्त कृति सफल ठहरिएको छ ।
मोतीदेवी स्मृति केन्द्रका अध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यले ‘प्रेरणादायी महिलाहरू’ प्रकाशनको उद्देश्यतिर लक्षित गर्दै भनेकी छन्, ‘आज महिलाहरू जनप्रतिनिधि बनेर जनमुखी विकास र योजना बनाउने काममा सक्रियतापूर्वक भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । महिलाहरूको सक्रियता र भूमिकाबिना अब समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन ।’ अन्ततः यो पुस्तक जनमुखी विकास र योजना बनाउने ठाउँमा पुगेकी जनप्रतिनिधि महिलाहरूका निम्ति पनि प्रेरणाको आधार बन्न सक्छ ।
कृति ः प्रेरणादायी महिलाहरू
विधा ः जीवनी
सम्पादक ः गरिमा शाह, ममता गिरीलगायत
प्रकाशक ः मोतीदेवी स्मृति केन्द्र